Maalinta: Diseembar 30, 2018
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, oo u yimid Gaziantep booqashooyin iyo xiriirro isdaba joog ah, wuxuu qabtay howlihii socda ee la xiriira ballaarinta Terminalka Gaziantep Airport iyo dhismaha dhismaha cusub ee Terminalka. [More ...]
Yalçın ayaa sii waday safarkeedii ugu dambeeyay ee KARDEMİR
Ferdi Yalçın, wuxuu dhintey 3 asagoo ka shaqeynayey howlihii shirarka ee Nodal Dedusting Nidaamka No. 28.12.2018 Furnace Dedusting System, oo ay dhistay NİL FC oo ku taal Magaalada Karabük Iron iyo Warshadaha Birta, ayaa la tukaday salaadda. [More ...]
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, 360 kun oo qof maalintii si ay u dhammaystiraan bartilmaameedka GAZ CommRAY Commuter Mashruuca 70'nin boqolkiiba dareenka guud waa la dhameystiray, ayuu yiri. Dhismaha TCDD iyo Gaziantep Dawlada Hoose [More ...]
Dhamaadka ugu dambeeya ee Tareenka Xawaaraha Sare iyo Waddada laga Filayo Bursa
Doorashadii 24 June waxay ku bilaabatay AK Party Bursa kuxigeenka Mustafa Esgin oo ka tagay bishii 6, Bursa maanta ayaa ka hadashay. AK, isagoo sharraxaya halka uu ku gaadhay daraasadihii uu ku soo qaatay Bursa [More ...]
Madaxweyne Xassan: Sanadka 2019 Wuxuu Noqon doonaa Sannad Marka Mashaariicda Waxaan Ballanqaadayno
Duqa Magaalada Caasimadda ee Gaziantep Fatma Şahin ayaa sheegtay inay ka fuliyeen mashaariic badan magaalada Gazi oo ay muddo dheer soo jireen ah isla markaana inbadan oo ka mid ah loo adeegsan doono 2019. Ahin, oo daabacay farriinta sanadka cusub, waa xanuunka 2019, [More ...]
Xilliga la furay Uludag, Waddada Waaweyn Waqtiga
Kuwa fasaxa ah ee doonaya inay aadaan Uludağ bilowga sanadka, Xargaha ayaa shaqeyn doona ilaa 02.00 habeenkii oo cusbooneysiinaya waqtiga safarka. mid 176 oo ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee golaha by furitaanka xilli ciyaareedka ee dalxiiska xilliga jiilaalka ee Uludag dalka Turkiga [More ...]
Nabdoonaanta Taraafikada waxay muhiimad weyn u leedahay nabadgelyada dadka maanta dunida. Xeerarka wadooyinka waxaa la baraa kaliya dadka da'da ah helitaanka laysanka darawalnimada, laakiin sidoo kale carruurta, taas oo abuureysa bulsho miyir qabta mustaqbalka. [More ...]
2018 wuxuu noqonayaa Sanadka Mashruuca Muhiimka ah ee ku yaalla İzmir
Dawladda Hoose ee Magaalada İzmir waxay ku maalgelisay lacag ka badan 2018 bilyan ginni 2.5. Wadarta maalgashiga sanadlaha ah ee 15 wuxuu ahaa 17.6 bilyan oo rodol. Wadarta tirada maalgalinta ay sameysay Metropolitan sanadihii ugu dambeeyay ee 5, [More ...]
Xeerka Sannadlaha ee Cusub ee Isgaadhsiinta ee Izmir!
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, 31 Diseembar fiidkii, dhammaan qaababka gaadiidku waxay ku dartay dhammaanba habka gaadiidka. Khadadka basaska qaarkood waxay u fidiyaan 02.05, metro iyo adeegyada taraamka ilaa 01.20, halka Alsancak Karşıyakamarkabkii ugu dambeeyay ee 03.00 [More ...]
Gaadiidka xamuulka ah ee la buuxiyay ee Denizli, 5 Injured
Waxay ku taal degmada Honaz ee degmada Denizli Kaklik oo ka gudbaya gaari ganacsi oo ay leeyihiin shil tareen xamuul ah oo dhacay 5 qof ayaa ku dhaawacantay. Sida ay sheegayaan wararka la helay, TCDD ee xaafada Kaklik ee degmada Honaz ee Denizli [More ...]
Bursa Uludağ Cable Car Charges 2018 Qiimaha: Waxaa dhowaan lagu daray aagga hudheellada labaad ee laga soo bilaabo Sar andalan oo dib loo cusbooneysiiyay sannadihii ugu dambeeyay, Bursa Uludağ Cable Car waa habka ugu fudud ee gaadiid Uludağ Hotels. [More ...]
Maanta taariikhda: 30 December 1894 Eskisehir-Kütahya Taariikhda
Maanta 30 December 1894 Eskisehir-Kütahya (76,9km) ayaa loo furay hawlgalka. Khadka ayaa laga soo iibsaday xukuumadda 31 December 1928.